म अमरसिंह राईलाई भोट दिने छुइनँ - खबरम्यागजिन
[ August 21, 2019 ] छाता उखेलेर कमल रोप्न थाले खबर
[ August 21, 2019 ] सिक्किमको राजनैतिक परिदृश्यमा चाँडै परिवर्तन देखिनेछः डीटी लेप्चा मुख्य समाचार
[ August 19, 2019 ] मुम्बईमा 16-औँ बसिबियाँलो सम्पन्न: हाम्रो छहारी -मा भेला भए महानगरीका नेपाली-गोर्खाहरू खबर
[ August 19, 2019 ] तृणमूल कङ्ग्रेसको कालेबुङ जिल्ला समिति गठन: सासंद शान्ता छेत्रीले डीआइ फण्ड, डेभ्लोप्मेन्ट एरिया अनि नर्सिङ विषय मुख्यमन्त्रीसमक्ष कुरा उठाउने खबर
[ August 17, 2019 ] मुख्यमन्त्री गोलेले भेटे गृहमन्त्री शाह खबर
Homeम्यागजिनम अमरसिंह राईलाई भोट दिने छुइनँ
कसैको भाईको रगत दार्जीलिङको सड़कभरि छरिएको छ – कसैको दाजु दवाई लिनु गएको अझसम्म फर्किएका छैनन् – कसैको छोरा झोलामा सुख्खा रोटी र डल्ले खोर्सानी बोकेर जुलुसमा गएको पुलिसको गोलीले त्यो झोलासँगै निष्प्राण भई ढलेको हिज अस्ति जस्तो लाग्छ। यो सबै गराउने यही तृणमूल सरकार हो – घाँसफूलको मालिक हो – ममता व्यानर्जी हो। यसैले यो चिन्हमा कसरी भोट दिनु? तपाईहरू आफै भन्नुहोस् त?
म खाँटी राई हुँ – मेरो आप्पा चाम्लिङ राई। मेरो आमा नेवाङ राई। तर म अमरसिंह राईलाई आगामी लोकसभा चुनावमा भोट दिने छुइनँ। मैंले यो मेरो लेख किन आफ्नो जातलाई सम्बोधन गरेर लेँखे भने अहिले दार्जीलिङ पहाड़मा आफूलाई गोर्खा जाति भन्दा पनि जात भनेर चिनाउने होड़बाजी छ।
हिरालाई हिराले काट्नुपर्छ भन्छन् यसैले म राई भएर यस्तो अमरसिंह जस्तो राईको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सोंच छ। जात जातमा हामीलाई रमाउन सिकाउने – जात जातमा हामीलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने यही तृणमूल सरकार हो – यही घाँसफूलको मालिक हो। यसैले म तृणमूललाई भोट दिने छुइनँ – मेरो भोट जातलाई होइन जातिलाई हुनेछ – गोर्खा जातिलाई हुनेछ पराई जातिको सुसारेहरूलाई होइन।
राजनीति गर्दा हामीले दूरदर्शिता अपनाउनु पर्छ। हुँदा – हुँदैको विधायकलाई पदत्याग गर्नु लगाएर सांसदको टिकट दिनु भनेको ममता व्यानर्जीले हामीलाई लितिपिति बनाउनु खोज्नु हो। अहिलेसम्म दार्जीलिङबाट विधायक बनाउनु नसकेको ममता व्यानर्जीले एक तीरले दुइ शिकार गर्नु खोजेका छन्। कारण यदि कथङकाल दार्जीलिङ लोकसभा संसदीय क्षेत्रबाट तृणमूल प्रार्थीले भोट जित्यो भने अमरसिंह राईको रिक्त पदमा हुने उपचुनावमा पनि तृणमूल प्रार्थीको जित पक्का पक्की हुनेछ।
यसको मतलब दार्जीलिङ जिल्लामा पनि उसको वर्चस्व कायम रहेको प्रमाण हुनेछ – यसैले यो चुनावको माध्यमबाट ममता व्यानर्जीले दार्जीलिङमा क्रमशै आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजिरहेका छन्। जनताले यो चाल अहिले नै बुझ्नुपर्छ र यस्तो चालबाजहरूलाई डाँड़ा कटाउनु पर्छ।
हामीलाई थाह छ त्योविनय र एलबीसित हिँड्ने समुहमा पनि कति त स्वाभिमानी आत्मा भएका गोर्खाहरू छन् – यो तिनीहरूलाई पनि चुनौति हो। विनय तामाङले कतिपय आफ्नो सम्बोधनमा गोजमुमोको झण्डाको माया लागेकोले अर्को झण्डा नबनाएको वकालती दिएको थियो खोई त आज आफ्नो झण्डाको माया गरेको?
उसले त त्यो झण्डालाई आफ्नो स्वार्थको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको थिएछ त! विनय तामाङ आफू त बिक्री भयो भयो तर आफूसँगै युवाहरूलाई पनि बङ्गोपसागरमा डुबाउने तरखरमा छन्। विनय तामाङले आफू बिक्री भएको बदलामा रातो बत्ती र लालकोठीको चौकी पायो तर युवाहरूले के पायो त? सोंच्ने बेला हो यो।
अझै धेरै कुराहरू छन् जो सिलसिलेवार तरिकाले समय समयमा राख्दै गँरूला। आजलाई भने यो लेख यतिमा नै समाप्त गर्न लागिरहेको छु। यद्धपि, जाँदा जाँदै फेरि पनि यो भन्न चाहन्छु कि – ‘म अमरसिंह राईलाई भोट दिनेछुइनँ’ – हजुरहरू नि दिनुहुन्छ?
छाता उखेलेर कमल रोप्न थाले August 21, 2019
सिक्किमको राजनैतिक परिदृश्यमा चाँडै परिवर्तन देखिनेछः डीटी लेप्चा August 21, 2019
मुम्बईमा 16-औँ बसिबियाँलो सम्पन्न: हाम्रो छहारी -मा भेला भए महानगरीका नेपाली-गोर्खाहरू August 19, 2019
तृणमूल कङ्ग्रेसको कालेबुङ जिल्ला समिति गठन: सासंद शान्ता छेत्रीले डीआइ फण्ड, डेभ्लोप्मेन्ट एरिया अनि नर्सिङ विषय मुख्यमन्त्रीसमक्ष कुरा उठाउने August 19, 2019
मुख्यमन्त्री गोलेले भेटे गृहमन्त्री शाह August 17, 2019
सोनादामा चितुवाको हमलामा महिला घाइते: घरको कुकुरले बचायो चितुवाको हमलामा महिलालाई August 16, 2019
गजलकार सञ्जोग खवासलाई प्रेम शेर्पा विरोकी पुरस्कार प्रदान गरिने August 16, 2019
जीटीएले केन्द्रिय योजनाहरूमा भ्रष्टचार गरिरहेको आरोप: सांसद विष्टले गराउने जाँच, केन्द्रलाई पैसा रोक्न गर्ने निवेदन August 16, 2019
कालेबुङमा स्वतन्त्रताको रौनक(फोटो फिचरसितै) August 16, 2019
साहित्यकार लक्खीदेवी सुन्दासको निधनमा चिया कविताद्वारा शोक प्रकट August 16, 2019
झाऱ्यो सेनाः सीआरपीको छापामारी जारीः सिंहमारीमा फाइरिङ-फेरि एकको मृत्युः जम्मा तीनको मृत्यु (36,241)
दार्जीलिङमा फेरि भड्कियो हिंसाः गोलीबारीमा एक पुलिस अधिकारीको मृत्युःजारी छ गोलीबारी (32,724)
विमल गुरूङले आज अचानक खुलासा गर्दै भने-दिल्लीले बोलाउँदैछ, गोर्खाल्यान्डको लागि हो भने मात्रै जान्छुः गुरूङ उत्रिए सांसदको राजिनामा मागको विपक्षमा (29,844)
मोर्चाले केन्द्रलाई दियो अल्टिमेटमः भन्यो- 8 अगस्त6बजीभित्र केन्द्रले वार्ता बोलाएन भने9अगस्तदेखि आन्दोलन कठोर गर्नेछौँ (28,620)
अनिश्चितकालीन बन्द जारीः ‘हामी यो पाली पनि चुक्यौं भने एक चम्ची पानीमा डुबेर मर्दा हुन्छ’- विनय तामाङ (25,148)
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (22,310)
बङ्गालको विरोधमा उत्रियो मिजोरम (21,104)
पिसाबमा रगत बग्न थाल्यो, तरै पनि अनशनकारीहरू भन्छन्, दबाई होइन गोर्खाल्याण्ड चाहिन्छ (20,102)
वरूण मृत्यु मामिलामा धेरैवटा सनसनीपूर्ण खुलासा: “मोर्चाको अर्को गुटले भनेको थियो, ‘तेरो दाजुलाई जेलबाट निकाल्नु छ भने हाम्रो गुटमा आइज, तर हामीले सम्झौता गरेनौँ’ (20,051)
केन्द्रिय गृहमन्त्रीको निम्तोः गोजमुमो-जीएमसीसी टोलीको दिल्ली प्रस्थान (19,680)
आज जे भयो, त्यसको दण्ड विनय र अनितले हन्ड्रेट टेन पर्सेन्ट पाउनेछन्, गोर्खाल्याण्ड माग्ने कोही छैन भन्ने देखाउन कुटपिट गरिएको हो- विमल गुरूङ (19,411)
टिस्टा भेल्लीमा चार पुलिस कर्मी घाइतेः बतायो पुलिस र स्थानीयले बेग्लाबेग्लै कथा (18,569)
बनियो राष्ट्रीय गोर्खाल्याण्ड समितिः अबको आन्दोलन बौद्धिक नेतृत्वले गर्नेछ-मुनिष तामाङ (18,465)
पवारले दिए गृहमन्त्रीलाई त्रिपक्षीय वार्ताको दबाउ: केन्द्रले चाँड़ै वार्ताको प्रस्ताव दिनेछ: राजनाथ (18,343)
गिरी टोली दिल्लीमाः मोर्चाको कार्यनीतिमा फेरबदलः केन्द्रले देशको सुरक्षाको हवाला दिएर मोर्चालाई सम्झौतामा ल्याउन सक्ने सूत्रको शङ्का (18,108)
बन्द खोल्ने नखोल्नेबारे निर्णय गर्ने दायित्व मोर्चाको हो- विमल गुरूङ (17,969)